ထိုင်ခုံ / ထိုင်ခုံ
မှဲ့ remover ကလောင်
LQ011-001 Ipl ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း
LQ003-099 အရေပြား Scrubber
ကုမ္ပဏီအမည်:Guangdong DongPin အလှအပနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ CO ။ , LTD.
လိပ်စာ:2ကြိမ်မြောက် Jinfu လမ်း Jiuqiao လမ်း, Jiujiang မြို့, Nanhai ခရိုင်, ဖိုရှန်မြို့,ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
လိပ်စာ:ယူအက်စ်ဂိုဒေါင်: 1036 S ကဂျူပီတာလမ်း Ste 200, ပန်းကုံး, TX 75042
DP-8230 လျှပ်စစ်အနှိပ်အိပ်ရာ (မော်တာတစ်လုံး)
DP-8230 လျှပ်စစ်အနှိပ်အိပ်ရာ (မော်တာတစ်လုံး) DongPin သည်အလှအပမျက်နှာကုတင်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လုပ်ဆောင်သည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
DP-8273 လျှပ်စစ်အလှအပအိပ်ရာ (မော်တာနှစ်ခု)
DP-8273 လျှပ်စစ်အလှအပအိပ်ရာ (မော်တာနှစ်ခု) DongPin သည်အလှအပမျက်နှာကုတင်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လုပ်ဆောင်သည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
DP-8294 လျှပ်စစ်အလှအပအိပ်ရာ (မော်တာသုံးလုံး)
DP-8294 လျှပ်စစ်အလှအပအိပ်ရာ (မော်တာသုံးလုံး) DongPin သည်အလှအပမျက်နှာကုတင်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လုပ်ဆောင်သည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
အလှပြင်ဆိုင်များအတွက် DP-8330 ဟိုက်ဒရောလစ်အလှအပအိပ်ရာ
DP-8330 အလှပြင်ဆိုင်အတွက် Hydraulic အလှအပအိပ်ဆောင် DongPin သည်အလှအပနှင့်ဖက်ရှင်အမျိုးမျိုးအတွက်အလှအပဆိုင်ရာကုတင်များကိုပေးသည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
အလှပြင်ဆိုင်များအတွက် DP-8337 ဟိုက်ဒရောလစ်အလှအပအိပ်ရာ
DP-8337 အလှပြင်ဆိုင်အလှအပအတွက်ဟိုက်ဒရောလစ်အလှအပအိပ်ရာသည် DongPin သည်အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အနှိပ်ကုလားထိုင်ကိုပေးသည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
DP-8394 လျှပ်စစ်အလှအပအိပ်ရာ (မော်တာလေးလုံး)
DP-8394 လျှပ်စစ်အလှအပအိပ်ရာ (မော်တာလေးလုံး) DongPin သည်အလှအပမျက်နှာကုတင်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လုပ်ဆောင်သည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
အလှပြင်ဆိုင်များအတွက် DP-8430 ဟိုက်ဒရောလစ်အလှအပအိပ်ရာ
DP-8430 အလှပြင်ဆိုင်အတွက် Hydraulic အလှအပအိပ်ဆောင် DongPin သည်အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်စာမေးပွဲစားပွဲတင်ဟိုက်ဒရောလစ်အလှအပကိုပေးသည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
DP-G902 လျှပ်စစ်အနှိပ်အိပ်ရာ (မော်တာသုံးလုံး)
DP-G902 လျှပ်စစ်အနှိပ်အိပ်ရာ (မော်တာသုံးလုံး) DongPin သည်အလှအပမျက်နှာကုတင်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လုပ်ဆောင်သည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
DP-G903 လျှပ်စစ်အနှိပ်အိပ်ရာ (မော်တာလေးလုံး)
DP-G903 လျှပ်စစ်အနှိပ်အိပ်ရာ (မော်တာလေးလုံး) DongPin သည်အလှအပမျက်နှာကုတင်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လုပ်ဆောင်သည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
DP-G904 Electric massage bed (မော်တာလေးလုံး)
DP-G904 Electric massage bed (မော်တာလေးလုံး) DongPin provides beauty facial beds electric massage bed in multiple styles and functions. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
DP-Z603 Electric massage bed (မော်တာသုံးလုံး)
DP-Z603 Electric massage bed (မော်တာသုံးလုံး) DongPin provides beauty facial beds electric massage bed in multiple styles and functions. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. Non-electric beds are designed for simple and convenient operation so that every user…
DP-Z604 Electric beauty bed (မော်တာသုံးလုံး)
DP-Z604 Electric massage bed (မော်တာသုံးလုံး) DongPin provides beauty facial beds electric massage bed in multiple styles and functions. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
2ကြိမ်မြောက် Jinfu လမ်း Jiuqiao လမ်း, Jiujiang မြို့, Nanhai ခရိုင်, ဖိုရှန်မြို့,ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
ယူအက်စ်ဂိုဒေါင်: 1036 S ကဂျူပီတာလမ်း Ste 200, ပန်းကုံး, TX 75042
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပေးရန်ကြိုးစားသည်. သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံ, နမူနာ & ကိုးကား, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
Guangdong DongPin အလှအပနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ CO ။ , LTD © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး